2019 Altima ရဲ့ဒီဇိုင်းအနေအထားကိုတရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Nissan! – AutoMyanmar
2019 Altima ရဲ့ဒီဇိုင်းအနေအထားကိုတရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Nissan!
Nissan ဟာသူ့ရဲ့ Sixth-generation 2019 Altima ကားအသစ်ကြီးရဲ့ဒီဇိုင်းအနေအထားကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲတရားဝင်ဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Sixth-generation Altima ကားအသစ်ကြီးကို မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ့် 2018 New York International Auto Show မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိနေပေမယ့် Nissan ဟာသတ်မှတ်ရက်မတိုင်ခင် ပြင်ပဒီဇိုင်းအနေအထားကိုချပြလိုက်တာပါ။
Altima ကားအသစ်ကြီးရဲ့ ပြင်ပဒီဇိုင်းဟာ ပြောင်လက်နေပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အစင်းရာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ အရောင်အသွေးကလည်း ငွေရောင်ဖြစ်နေပြီး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ထင်းနေမှာတော့အမှန်ပါပဲ။ Altima ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းဟာ Nissan Sedan တွေရဲ့အနာဂတ် ဒီဇိုင်းအနေအထားကို ထင်ဟပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လဲ Nissan ကပြောကြားထာပါတယ်။
2018 New York International Auto Show တရားဝင်ကျင်းပမယ့်ရက်က မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး Sixth-generation Altima ကားအသစ်ကြီးဟာတော့ Auto Show ကိုမတ်လ ၂၈ ရက်မတိုင်ခင်ကတည်းကရောက်ရှိနေမှာပါ။ New York မြို့ကိုအလည်တစ်ခေါက်သွားရောက်ပြီး 2018 New York International Auto Show ကိုပါတစ်ပါးတည်း အလည်သွားရောက်ချင်ကြတဲ့ ကားချစ်သူအနေနဲ့ကတော့ Ticket for New York International Auto Show ကနေတဆင့် လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။